karna das परदेशबाट छोरो फर्केन… | The New Blog from Chhorepatan,Pokhara
« नाङ्गै, साइकल र्‍यालीमा
Adrin Pradhan आउनुस्, एड्रियनलाई जानौँ »
karna das परदेशबाट छोरो फर्केन…
December 15, 2008 by chhetriashish4u – अच्युत कोइराला
एक दिन साँझ कर्ण दास खाना खाइओरी सुत्ने तर्खरमा थिए । त्यस दिन किन हो उनलाई उति राम्रो निन्द्रा लागेको थिएन । मन पनि उनको उदास-उदास थियो । यत्तिकैमा उनका छिमेकीले फोन आएको जनाऊ दिए । उनी गह्रौँ मन लिएर ओछ्यानबाट ओर्लिए र फोन रिसिभ गर्न छिमेकतिर दगुरे । उनले कानमा फोन अड्याउँदै भने- ‘हेल्लो !’
उताबाट जुन आवाज आयो, त्यो कर्ण लागि सुपरिचित आवाज थियो तर आवाजमा पीडा थियो, गम्भीरता र मधुरोपना थियो । पहिलेको जस्तो आवाजमा उत्साह, खुशी र उमङ्ग थिएन । कर्ण सोधे- ‘दाइ सञ्चो छैन कि कसो ? किन आवाज आज बेग्लै सुन्दैछु !’
‘सञ्चो छैन भाइ, मेरो मनलाई सञ्चो छैन’, उताबाट आइरहेको आवाज जापानबाटको आवाज थियो । बोलिरहेका व्यक्ति चर्चित गीतकार बीबी थापा थिए । जसका दर्जनौँ गीतहरु कर्णले गाइसकेका थिए । कर्णको स्वरबाट उनी यति प्रभावित छन् कि कुनै राम्रो गीत सिर्जना भयो भने बीबी थापा, कर्णलाई सुनाउन बिर्सँदैनन् । त्यो पनि त्यस्तै भएछ, थापाले एउटा गीत सिर्जना गरेछन् । जापानजस्तो ठाउँमा उनको गीतको भाव, मर्म र व्यथा कसले पो बुझ्थ्यो र ! बुझे पनि कर्णले जति गहिराइमा बुझ्न सक्थे, अरुले त्यत्ति नै महत्वका साथ त्यो गीतको मर्म, गहिराई र आशय बुझ्थे होलान् र ! बीबीलाई यस्तै लागेको थियो र त्यो रात कर्णलाई सम्झेका थिए । बीबीले गीतको टुक्रा सुनाउन थाले-
परदेशबाट छोरो फर्केन…
आउँछु आउँछु भन्थ्यो, चारै धाम घुमाउँछु भन्थ्यो…
पर्खिबसेकी मेरी बूढी आमा…
यो बीबी थापाको आफ्नै कथा थियो । थापाले आफ्नी बूढी आमालाई जापानबाट फर्केलगत्तै चार धाम घुमाउने वचन दिएका थिए । तर परदेशमै हुँदा आफ्नी बूढी आमाको मृत्युको खबर सुन्नु पर्दा कुन चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ छोरोको मन रुन्नथ्यो ! आफूले गरेको वाचा अनि आमाको अन्तिम इच्छा पनि पूरा गर्न नपाउँदा कटक्क मन खाएपछि बीबी थापालाई यो गीत फुरेको थियो ।
उनले त्यो रातभरि आमालाई सम्झिएर रुँदै रात बिताएका थिए । र, आँशुको भेलसँगै गीतको सिर्जना भएको थियो । जुन दिन कर्णलाई फोन गरेर यो गीतको कथा सुनाइरहेको थिए- कथा सुन्ने कर्ण दास र सुनाउने बीबी थापा दुवैका गहभरि आँशु थिए । आँशुले छपक्क छोपेको थियो कर्णलाई फोनमा बातचित सकिँदा । उनले बीबीबाट अनुमति लिएर त्यसैबखत गीत टिपे । बीबीले पनि कर्णलाई अनुरोध गरे- “भाइ, यो गीत तिमीले गाइदिए, म अभागी छोरोको अपूर्ण श्रद्धाञ्जली पूर्ण हुने थियो !”
कर्ण पनि भावुक मनका, बीबीका यी अनुरोध टेलिफोनबाट कानमा ठोक्किएको मात्र थियो, उनलाई बारम्बार त्यो अनुरोधले झस्काइरहन्थ्यो । पुरानो डुङ्गा एल्बम तयार गर्ने बेलामा कर्णले यो गीत पनि रेकर्ड गराए । अरु त अरु गीतको भाव नमरोस् भनेर डीएनए प्रोडक्शनबाट यसको भिडियो पनि गीतको आशय अनुरुपकै तयार पारे । तर अन्तिम अवस्थामा पुरानो डुङ्गा एल्बममा यो अटेन । गीत अडियो क्यासेटमा नआइकनै भिडियोमार्फत् निकै चर्चित र लोकप्रिय बन्यो । गीत त छँदैछ, तर त्योभन्दा बढी यसमा जलप लगाइदिएको थियो- भिडियोले । भिडियो हिट भएपछि बजेट २००४ मा यो गीत अटाउन पुग्यो ।
भिडियो निर्माणको पनि अर्को रोचक प्रसङ्ग छ । भिडियोमा ३५० जनाभन्दा बढी आमाहरु अटाएका छन् । जसलाई छायाँकन गर्न डीएनए प्रडक्शनलाई तीन महिना लागेको थियो । जीवनका आखिरी दिनहरु निस्तो दिनचर्यामा बिताइरहेका थरिथरिका बूढीआमाहरुको टीठलाग्दो अवस्थाले भिडियोलाई ज्यादै सशक्त बनाएको थियो ।
यतिबेला कर्ण दास परदेशमा छन् । उनको नयाँ एल्बमको बजारमा ल्याउने तयारी सम्झना अडियो भिडियोले गरिरहेको छ । उनका प्रशंसकहरुले पनि भनिरहेका छन्- परदेशबाट कर्ण फर्केन !
Posted in singer | Tagged परदेशबाट छोरो फर्केन., karna das | LeaveaComment	Comments RSS